China Slurry pump pump liner factory sy mpamatsy | YAAO
Ny faritra mando vita amin'ny kodiarana dia fanoherana mahery vaika sy fanoherana ny harafesina, matetika ampiasaina amin'ny fepetra miasa asidra. Toy ny fanodinkodinana amin'ny indostrian'ny harena ankibon'ny tany, slurry misy poti kely ary tsy misy sisiny matevina. Ny ampahany amin'ny famindran-toerana dia misy ny Cover Plate Liner, ny lozam-pifamoivoizana, ny lozisialy takelaka, ny sisin-tsoratry ny takelaka vita amin'ny takelaka.
Ny fitaovana vita amin'ny fingotra nampiasainay dia manana fanoherana ambony noho ny fitaovana hafa rehetra amin'ny fampiharana slurry sombin-javatra tsara. Ny antioxidants sy anti degradents ampiasaina amin'ny fitaovantsika dia nohatsaraina hanatsarana ny fiainana mitahiry sy hampihenana ny fahasimbana mandritra ny fampiasana. Ny fanoherana ny fikaohon-tany avo lenta dia atolotry ny fitambaran'ny faharetany avo, ny tanjaka am-pahefana avo ary ny hamafin'ny morontsiraka ambany.
Liners paompy vita amin'ny kofehy - Ny kofehy mora soloina dia nopetahana fa tsy mifatotra, amin'ny fantsom-pirazanana hahazoana miraikitra tsara sy manamora ny fikojakojana. Ny valin'ny metaly mafy dia azo ovaina tanteraka amin'ny elastomer bobongolo tsindry. Ny tombo-kase Elastomer dia miverina miverina miharo volo rehetra
Firafitry ny paompy slurry
* Satria mpanamboatra tena izy isika dia manana tahiry maro be ho an'ny kirihitrala tenda slurry
YAAO® Rubber Materials Type And Data Desications
Kaody YAAO Anaran'ny fitaovana Karazana Famaritana
Volo voajanahary YR26 dia fingotra voajanahary mainty sy malefaka. Izy io dia manana fanoherana ambonin-tany mihoatra ny fitaovana hafa rehetra amin'ny fampiharana slurry sombin-javatra tsara. Ny antioxidants sy antidegradents ampiasaina amin'ny RU26 dia novaina hanatsarana ny fiainana fitehirizana ary hampihena ny fahasimbana mandritra ny fampiasana. Ny fanoherana ny fikaohon-tany avo lenta an'ny RU26 dia omena amin'ny alàlan'ny fitambaran'ny faharetany avo, ny tanjaka avo lenta ary ny hamafin'ny Shore ambany.
Volo voajanahary YR33 dia fingotra voajanahary mainty misy ny hakitroka ambany ary ampiasaina amin'ny valizy sy paompy ary paompy amin'ny cyclone sy paompy izay ananan'ireo fananana ara-batana ambonimbony kokoa ny fanoherana ny hantsana mafy sy maranitra.
Volo voajanahary YR55 dia fingotra voajanahary mainty sy anti-manimba. Izy io dia manana fanoherana ambonin-tany mihoatra ny fitaovana hafa rehetra amin'ny fampiharana slurry sombin-javatra tsara.
YS01 EPDM Rubber Elastomer synthetic
YS12 Nitrile Rubber Elastomer synthetic Elastomer YS12 dia fingotra sentetika izay matetika ampiasaina amin'ny fampiharana misy tavy, menaka ary savoka. S12 dia mahatohitra fanoherana ny fikaohon-tany.
Elastomer synthetic YS31 dia elidera oksiasiôna sy mahatohitra hafanana. Izy io dia manana fandanjana tsara ny fanoherana simika ny asidra sy ny hydrocarbons.
YS42 Polychloroprene (Neoprene) Elastomer synthetic Polychloroprene (Neoprene) dia elastomer sentetika avo tanjaka miaraka amin'ny fananana mavitrika izay ambany kely noho ny fingotra voajanahary. Tsy dia misy fiantraikany amin'ny hafanana noho ny fingotra voajanahary, ary manana fanoherana tsara ny toetr'andro sy ny ozon. Izy io koa dia maneho fanoherana tsara ny menaka.
YAAO® Slurry Pump Rubber Parts Fampiharana
YAAO Slurry Pump Rubber Parts dia be mpampiasa amin'ny paompy slurry AHR / LR / Horizontal, paompy slurry mitsivalana mitsivalana, paompy slurry marindrano Centrifugal, paompy slurry milomano misy Warman, pompy slurry simika, paompy slurry fasika Silica, paompy slurry fanodinana mineraly, De Paompy fanodinam-rano, paompy fitrandrahana varimbazaha, paompy fanamafisam-pofona, paompy fantsom-boaloboka, paompy famoahana baomba Paompy slurry, paompy slurry asidra Ni, paompy fasika coarse, paompy tailars coarse, paompy slurry matrix phosphate, pump pump slurry, pumps concentrations Minerals, pumps slurry media havesatra, pumped ash buburry, paompy slurry ambany paompy, paompy famahanana lamba, paompy amin'ny fasika misy solika, paompy fasika mineraly, paompy manidina tsara, paompy fanamafisam-peo, paompy fanamafisana matevina, paompy fanodinana paompy, paompy famindrana fantsom-pamokarana pumping ry, paompy slurry arina, paompy flotation.
Fialana andraikitra: ny marika YAAO® dia mari-pamantarana voasoratra anarana, ary tsy misolo tena na tsy voafatotra amin'ny Warman®, sy ny marika hafa, ireo marika rehetra ireo dia hajain'ny tompony. Izay anarana, maodely, isa, marika na famaritana rehetra dia ampiasaina ho an'ny tanjona ihany, ary tsy midika akory izany fa ny ampahany na ny paompy voatanisa dia vokatry ny Warman®, ny faritra iva YAAO® azo soloina ihany. An'ity YAAO ity antontan-taratasy ity, ary tsy azo averina navoaka amin'ny antoko fahatelo miaraka amin'ny fanomezan-dàlana an-tsoratra.
Teo aloha: AH Slurry Pump Rubber THROAT BUSH
Manaraka: Peratra expeller slurry pump
Famafazana paompy vita amin'ny fantsom-bozaka
Pipe famoahana paompy slurry